A na-emelite Telegram na mmelite na Paspọtụ na ọkwa | Gam akporosis
Eder Ferreño | | Ngwa gam akporo, Nkuzi
Telegram emelitere ọzọ. Ngwa izi ozi a ma ama, dị ka ọ dị na mbụ, na-enye mmelite ọhụrụ. Nke a bụ ụdị 4.91 nke ya, nke na-abịa na usoro nke ndozi ọhụrụ. Ihe ndi a bu oganihu n’uzo obula, gunyere Passport, ihe ohuru nke anyi diri n’ime ya rue ugbua.
Ọhụrụ a melite, Telegram chọrọ ịnọgide na-egosi ihe mere na ọ na-atụle ya dị ka ndị kasị mma ozi ngwa. Atụmatụ ọhụrụ na mmezi ahụhụ bụ mkpịsị ugodi nke ya. Kedu ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na ụdị ọhụrụ nke ngwa ahụ?
Oge a ego ole a na-ewebata dị obere karịa n’oge ndị ọzọ. Mana ndị a bụ mmụba nke ndị ọrụ na-atụ anya, n'ihi na e nweela nsogbu ụfọdụ n'oge gara aga. Ya mere, ndị na-eji Telegram kwesịrị inwe afọ ojuju na mgbanwe ndị a.
1 Nkwalite paspọtụ
2 Improvementsma Ọkwa ndozi
3 Desktop mbipute ndozi
Ọrụ nchekwa akwụkwọ ahụ amalitebeghị nke ọma, ebe a chọpụtara na ọ nọghị nchekwa dịka ụlọ ọrụ ahụ kpọsaa. Maka nke a, ụlọ ọrụ ahụ ewebatala mgbanwe n'akụkụ a, iji gosipụta na ọ bụ ọrụ kachasị nchebe. Maka ya, agbanweela hashing algorithm nke okwuntughe ha.
Nke a pụtara na Telegram emeela ka algorithm dị mma maka ịchekwa okwuntughe. Ime otu a ga - eme ka ọ dịrị nchebe. Ihe ọzọ dị mkpa na Passport bụ na ọnụ ọgụgụ akwụkwọ ndị anabatara na-abawanye. A ga-anabata ụdị akwụkwọ ọhụrụ, gụnyere ndị a sụgharịrị. Yabụ ị nwere ike ịchekwa ụdị dị iche iche na ya.
Improvementsma Ọkwa ndozi
Isi mgbanwe na ngwa dị ka ndị dị otú ahụ na-abịa na ọkwa. Site ugbu a na ndị ọrụ ha ga-enwe ike itinye ndị ọzọ na notma Ọkwa. Nke a pụtara na ọ bụrụ na anyị emeela mkpebi iji mechie nkwupụta niile anyị natara na Telegram, anyị nwere ike itinye mgbakwunye ma mee ọkwa nke onye ọrụ anyị nwere ike ịnata.
Maka nke a, anyị ga-aga ntọala ntọala. Anyị ga-ahụ na ewebatala ngalaba a na-akpọ ndị ọzọ, nke ga-enye anyị ohere ijikwa ọkwa ndị a. Echiche bụ na n'ụzọ a, ndị gị na ha na-ekwukarị okwu, ga-aga n'ihu na ọkwa. Will ga-enwe ike ijikwa ihe niile masịrị gị na ngwa ahụ.
Ebe ọ bụ na ndị a gupuru na Telegram ka ịmegharịrị nhọrọ iji hazie. Ekele ya, ọ bụ onye ọrụ ga-ejikwa ọkwa ndị a n'ụzọ ha chere na ọ dị mma.
Desktop mbipute ndozi
Ọbụghị naanị ngwa ekwentị ekwentị Telegram webatara mgbanwe. Ọzọkwa ndị ọrụ ahụ na-eji nsụgharị desktọọpụ ga-enweta ụfọdụ akụkọ. Nke mbu bu a kwesiri ngosi mma na gburugburu nke ehihie na abalị na otu. Ugbu a, ha na-arụ ọrụ nke ọma ma dị iche karịa, ezigbo ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iji ngwa ahụ n'abalị na-enweghị iji ọkụ.
Ọzọkwa, a na-ewebata ọrụ na-enye anyị ohere ibupụ mkparịta ụka na ngwa ahụ. Ozi ọma ma ọ bụrụ na ịchọrọ inwe ike ịchekwa ụfọdụ mkparịta ụka, yana ọrụ ọhụrụ a ọ ga-adị mfe karịa iji nweta nke a.
Ndozi nchedo nke etinyegoro na Telegram na Passport Ha na-eru nsụgharị desktọọpụ nke ngwa ahụ. You gaghị echere oge tupu ị nweta ha. Yabụ ndị ọrụ niile ga - enwe mmelite kachasị ọhụrụ na mpaghara a. Ozi ọma na-egosi ngwa ngwa ha na-arụ ọrụ na ngalaba nchekwa.
Ihe ohuru nke Telegram, 4.91 na-agbasa ugbua. Emeela mmelite ahụ, yabụ o nwere ike ịbụ na ị natara ya na awa ndị ikpeazụ, ma ọ bụ na-achọ ịnata ya. Ọ ga-abata site na OTA, yabụ na ị gaghị eme ihe ọ bụla, chere naanị ka ọ rute. Kedu ihe ị chere gbasara akụkọ abịala na ngwa ahụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Telegram 4.91: Mmelite paspọtụ na ọkwa ka mma